musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » IATA inotangisa chitsva lithiamu bhatiri chitupa
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hong Kong Kupwanya Nhau • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Center of Excellence yeVanozvimirira Vanogonesa (CEIV) Lithium Bhatiri yakatangwa neIATA yekuvandudza kubata kwakachengeteka uye kutakurwa kwemabhatiriyiti etiyamu kwese kwese kwese.
Lithium mabhatiri akakosha sosi sosi yezvinhu zvakawanda zvevatengi zvatinovimba nazvo tese.
Izvo zvakakosha kuti lithiamu mabhatiri anogona kutumirwa zvakachengeteka nemhepo kungave nezvakapedzwa zvigadzirwa kana sezvinhu zvezvinhu zvepasirese zvekupa cheni.
CEVA Logistics ndiyo yekutanga CEIV Lithium Battery chitupa chebasa rayo kuHong Kong International Airport uye kuAmsterdam Schiphol Airport.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yatanga chirongwa chitsva cheindasitiri- Center of Excellence yeVanozvimirira Vanogonesa (CEIV) Lithium Bhatiri - kusimudzira kubata kwakachengeteka uye kutakurwa kwemabhatiriyiti eritiyamu pane cheni yekutengesa.
“Lithium mabhatiri masimba akakosha emagetsi kuzvinhu zvakawanda zvevatengi zvinovimba nesu tese. Uye zvakakosha kuti tikwanise kuvatakura zvakachengeteka nemhepo kungave nezvakagadzirwa zvigadzirwa kana sezvinhu zviri mumaketani epasi rese. Ndicho chikonzero isu takagadzira iyo CEIV Lithium Battery certification. "Inopa vanotakura nendege vimbiso dzekuti makambani anezvigadzirwa anoshanda akachengetedzeka kana achiendesa mabhatiri e lithiamu," akadaro Willie Walsh, Iată'S Director General uye CEO.
Kutumirwa kwema lithiamu mabhatiri (ega kana nezvakagadzirwa zvigadzirwa) zvinofanirwa kutevedzera zvakanyatsogadzika zvepasi rese kuchengetedzeka maitiro ekugadzirwa, kuyedzwa, kurongedzwa, kuiswa mucherechedzo, kunyorwa, uye kunyorwa. Izvi zvinodiwa chinhu chakakosha cheIATA Lithium Battery Shipping Regulations (LBSR) uye yeIATA Dangerous Goods Regulations (DGR) iyo inosanganisa mirau nemashandiro ekushandisa kubva kumaindasitiri uye nyanzvi dzehurumende.
CEVA Logistics ndiyo yekutanga CEIV Lithium Battery chitupa chebasa rayo pa Hong Kong International Airport uye panguva Amsterdam Schiphol Airport, zvichitevera nguva yakareba yekuongorora.
“Tinokorokotedza CEVA nekuve yekutanga logistics kambani kuzadzikisa CEIV Lithium Battery certification. Kubva kune vanobata zvinhu, makambani anobata pasi, vanotakura zvinhu uye makambani anotakura zvinhu, vanobatana zvakanyanya muketani yemutengo iyo inotora chikamu muECIV Lithium Bhatiri, inosimba uye inoshanda kune indasitiri. Pakupedzisira, tese tinoda kuona dandemutande renzira dzekutengesa dzeECIV Lithium Bhatiri nevatori vechikamu vakasimbiswa kwazvinobva, kwavanoenda uye nenzvimbo dzekufamba, ”akadaro Walsh.
“Vatengi vedu vezvemotokari, zvehutano uye tekinoroji vanokoshesa kugona kwedu kuunza mhinduro dzemhando yepamusoro zvisinei nekwairi kuenda kana mhando yerudzi rwezvitoro, semabhatiri e lithiamu-ion. Ruzivo rwedu mukutakura huwandu hwakawanda hwemabhatiri hwakatiita shamwari yakanaka neIATA mukuyedza yavo itsva CEIV certification. IATA inoenderera ichitungamira nzira mukupa zviyero, mirau uye nongedzo yekuvandudza huwandu hwese uye kuchengetedzeka muindasitiri yekufambisa mhepo. Ichi chitupa chitsva chinopa vatengi kutonyanya kuvimba mukukwanisa kwedu kutakura uye nekuvimbika kutakura mabhatiri avo eIi-ion, "Peter Penseel, COO wekutakura nendege kweECVA Logistics.